शरीरका अंगमा यी अचम्म लाग्दा संकेत किन देखिन्छन् ? जान्नुहोस् -Dainikplus-
शरीरका अंगमा यी अचम्म लाग्दा संकेत किन देखिन्छन् ? जान्नुहोस्
एजेन्सी । हाम्रा शरीरका अंगहरुलाई नशाले जोडिएका छन् । एउटा अंगको सम्बन्ध अर्को अंग संग हुने गर्छ । नशाले जेलिएको हाम्रो शरीरले विभिन्न अवस्थामा विभिन्न संकेत दिने, क्रियाकलाप गर्ने गर्छ । शरीरका अंगहरुले केही साधारण तर अचम्म लाग्ने संकेतहरु देखाउँछन्, जसको प्रत्यक्ष कारण हामीले देख्न सक्दिनौं ।